बाराका सिडीओ चढेको गाडी दुर्घटना, सशस्त्रका एसपी पोखरेलको घटनास्थलमै मृत्यु, सिडियो गम्भीर घाईते ! – On Khabar
बाराका सिडीओ चढेको गाडी दुर्घटना, सशस्त्रका एसपी पोखरेलको घटनास्थलमै मृत्यु, सिडियो गम्भीर घाईते !
January 26, 2019 January 26, 2019 onkhabar	Comment(0)
काठमाडौं– बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी -\_(सह–सचिव) गणेश भट्टराई र सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी बलराम पोखरेल चढेको गाडी दुर्घटना भएको छ ।
दुर्घटनामा परेर सशस्त्र प्रहरी बल १२ नम्बर गणका गणपति समेत रहेका एसपी बलराम पोखरेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रदेश नम्बर २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरि पालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । बाराका प्रजिअ भट्टराईको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ ।
बाराको कलैयाबाट निजगढ जाने क्रममा हाईवेमा ट्याक्टरसँग ठोक्किएर प्रजिअ चढेको गाडी दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लगिएको छ ।
उनलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी भईरहेको बताइएको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ ।
युवा संगठन गुल्मीको अध्यक्षमा ढकाल , अबको क्रान्तिमा युवाको मुख्य भूमिका : सन्देश
अनखबर माघ १२ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट युवाहरुको संगठन युवा संगठन नेपाल गुल्मीले आफ्नो दोस्रो सम्मेलन जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनले कृष्ण डकालको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय जिल्ला कमिटि समेत गठन गरेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य सन्देश पौडेलले नेपालमा निर्णायक क्रान्ति सन्निकटमा रहेको भन्दै […]
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) लुम्बिनी समन्वय समितिले १२६औं माओदिवसको अवसर पारी विशाल विद्यार्थी सभा सम्पन्न गरेको छ । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखी ट्राफिकचोकसम्मको ¥याली ट्राफिकचोकमा आएर सभामा परिणत भएको थियो । लुम्बिनी अञ्चलका रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, नवलपुर, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरुबाट विद्यार्थीहरु उपस्थित रहेको सो सभामा निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गर्नसमेत […]
प्रधानमन्त्री ओलीलाई एयरपोर्टमै कालो झण्डाले भयो स्वागत !
सफल व्यापारी बन्न जान्नैैपर्ने अलीबाबाका मालिक ज्याक मा’का यि ६ सुत्रहरु !
हिमपातले कष्टपूर्ण छ, जनताको जीवन (फोटो फिचर) !